उपत्यकामा दिनहुँ सय हाराहारी संक्रमित : संक्रमण भयावह हुन थालेपछि बल्ल आइसोलेसन भवन खोजी « Pahilo News
उपत्यकामा दिनहुँ सय हाराहारी संक्रमित : संक्रमण भयावह हुन थालेपछि बल्ल आइसोलेसन भवन खोजी
प्रकाशित मिति : 10 August, 2020 7:46 am
काठमाडौं, २६ साउन । उपत्यकामा कोरोना संक्रमण भयावह हुन थालेपछि बल्ल स्वास्थ्य मन्त्रालय आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापनमा जुटेको छ ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा दिनमा एक सय जनाभन्दा बढी संक्रमित देखिएपछि आइसोलेसनका लागि खाली भवन खोज्न थालिएको हो । मन्त्रालय सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार पहिला तोकिएका आइसोलेसन भरिएपछि कीर्तिपुरको आयुर्वेद अस्पतालमा क्षमता विस्तार गरेर दुई सय शैंया तयार गरिएको छ ।
आयुर्वेद अस्पतालको कोरोना संक्रमित व्यवस्थापन टोलीका संयोजक डा. जितेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार कीर्तिपुर नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन बनाएको भवनमा आइसोलेसन बनाइएको हो । क्वारेन्टाइन खाली हुनेबित्तिकै वाईफाई, पानी, बत्तीको व्यवस्था गरेर लक्षण नभएका संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने प्रबन्ध मिलाइएको थियो ।
तीनतले भवनको पहिलो र दोस्रो तलामा संक्रमितलाई राखिएको छ । भवनमा महिलाका लागि ४ वटा र पुरुषका लागि ८ वटा मात्रै शौचालय छन् । कार्यालय प्रयोजनका लागि बनाइएको यो भवनमा बाथरुम एउटा पनि छैन ।
डा. श्रेष्ठले आइतबार राति ९ बजेसम्म १ सय १६ जना संक्रमित भर्ना भएको जानकारी दिए । ‘२० जना संक्रमित व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीले एक सयभन्दा बढीलाई व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । संक्रमित आउने क्रम जारी छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले यसअघि नै कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्न तोकेका बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा १ सय २०, पाटन अस्पतालमा ६०, केएमसीमा १ सय शय्या, टेकुमा ५४ शैंया छन् । ती सबै संक्रमितले भरिएपछि सेना र प्रहरी अस्पतालमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
यी दुई अस्पताललाई असार २१ को मन्त्रीस्तरीय बैठकले लेभल २ मा समावेश गरेको थियो । तर, सैनिक अस्पतालले संक्रमित सेना र प्रहरीले संक्रमित प्रहरीलाई मात्रै भर्ना गर्ने भनेपछि मन्त्रालयले अर्को विकल्प अघि सारेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकामा आइतबार ९२ जना संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै उपत्यकामा संक्रमितको संख्या १ हजार १ सय ३६ पुगेको छ । काठमाडौंका ९ सय १२ संक्रमितमध्ये १ सय १६ जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन् ।
ललितपुरमा १ सय ३९ र भक्तपुरमा ८५ संक्रमित भएकामा ३२–३२ जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन् । उपत्यकामा ६ जनाको संक्रमणकै कारण मृत्यु भइसकेको छ ।
ईडीसीडीका अनुसार गंगालाल अस्पतालमा थप चार जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । गंगालालमा संक्रमितको संख्या १६ जना पुगेको छ । त्यस्तै एभरेस्ट बैंकमा तीन जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष संलग्न हुने प्रहरी र अन्य कार्यालयका कर्मचारीलाई संक्रमण देखिएपछि समुदायमा फैलने आकलन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका संक्रमित प्रहरीले परिवार र आफन्तलाई समेत सारेको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट